ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေ ကို နေ့တိုင်း ထိတွေ့နေရတာမို့ ပင်ပန်းပေမယ့် ဘဝမှာ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေရတယ် ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး .. – Let Pan Daily
ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကို အပြည့် အဝရရှိ ထားတဲ့ Beauty Blogger မလေး နေခြည် ဦးကတော့ သူမရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် ပရိသတ်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခု အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်ဦးနေရာကနေ ပါဝင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုလှလာတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း ကတော့ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး ပရိသတ်တွေရှေ့ကပါ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦးက လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ စိတ်ရောလူကိုပါ ပြင်ဆင်ပြီး ပရိသတ်တွေရှေ့မှောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ နေခြည်ဦးက “ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရှင်သန်နေထိုင်နေတဲ့ သူတွေဟာ အပျော်ဆုံး လူသားတွေလို့ နေခြည်ထင်တယ်။နေခြည်ကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ Beauty Blogger အလုပ်၊ အနုပညာ အလုပ်တွေနဲ့ နေ့တိုင်း ထိတွေ့နေရတာမို့ ပင်ပန်းပေမယ့် အမြဲတမ်း ပျော်နေတာပဲ။ အခု ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ chilliesေ ကာ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် ဖြစ်နေပြီလား? မဖြစ်သေးရင် နေခြည်နဲ့တူတူ ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လိုချင်တာတွေဝယ်မယ်.. လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်မယ်.. လှလှလေးနေမယ်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဘဝကို စိတ်တိုင်းကျရတဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။
နေခြည်ဦးကတော့ (၃)နှစ်ကျော် (၄) နှစ်အတွင်းမှာပဲ အောင်မြ င်မှုတွေ အကြီးအကျယ် နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိ ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နေခြည်ဦးလိုမျိုး ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဖြစ်နေပြီလား ပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ဝါသနာပါတဲ့ အလုပျတှေ ကို နတေို့ငျး ထိတှနေ့ရေတာမို့ ပငျပနျးပမေယျ့ ဘဝမှာ အမွဲတမျး ပြျောရှငျနရေတယျ ဆိုတဲ့ နခွေညျဦး ..
ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတရားတှကေို အပွညျ့ အဝရရှိ ထားတဲ့ Beauty Blogger မလေး နခွေညျ ဦးကတော့ သူမရဲ့ကွိုးစားမှုကွောငျ့ ပရိသတျပေးတဲ့ နရောတဈခု အခိုငျအမာရရှိထားသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးတဈဦးနရောကနေ ပါဝငျနရေပွီဖွဈတဲ့ နခွေညျဦးကတော့ တဈနတေ့ဈခွား ပိုပိုလှလာတာလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျး ကတော့ စိတျဓာတျတှကေပြွီး ပရိသတျတှရှေကေ့ပါ ပြောကျကှယျသှားခဲ့တဲ့ နခွေညျဦးက လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ စိတျရောလူကိုပါ ပွငျဆငျပွီး ပရိသတျတှရှေမှေ့ောကျ ပွနျလညျရောကျရှိလို့လာခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ နခွေညျဦးက “ကိုယျ့ဘဝကိုယျ့စိတျကွိုကျ ရှငျသနျနထေိုငျနတေဲ့ သူတှဟော အပြျောဆုံး လူသားတှလေို့ နခွေညျထငျတယျ။နခွေညျကတော့ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ Beauty Blogger အလုပျ၊ အနုပညာ အလုပျတှနေဲ့ နတေို့ငျး ထိတှနေ့ရေတာမို့ ပငျပနျးပမေယျ့ အမွဲတမျး ပြျောနတောပဲ။ အခု ဒီစာကို ဖတျနတေဲ့ chilliesေ ကာ ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျ့ စိတျကွိုကျ ဖွဈနပွေီလား? မဖွဈသေးရငျ နခွေညျနဲ့တူတူ ဖွဈအောငျလုပျကွမယျ။ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ့စိတျကွိုကျ လိုခငျြတာတှဝေယျမယျ.. လုပျခငျြတာတှေ လုပျမယျ.. လှလှလေးနမေယျ။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဘဝကို စိတျတိုငျးကရြတဲ့အကွောငျး ပွောလာပါတယျ။
နခွေညျဦးကတော့ (၃)နှဈကြျော (၄) နှဈအတှငျးမှာပဲ အောငျမွ ငျမှုတှေ အကွီးအကယျြ နဲ့ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့အောငျမွငျမှုတှရေရှိ ခဲ့သူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး နခွေညျဦးလိုမြိုး ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ ဖွဈနပွေီလား ပွောပွခဲ့ပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
နာမည်ကျော် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း